Jekiseni, Tourism, Zvematongerwo enyika: Maonero Echokwadi naMinister, Anogadzikana uye ari Gamba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Caribbean » Jekiseni, Tourism, Zvematongerwo enyika: Maonero Echokwadi naMinister, Anogadzikana uye ari Gamba
African Tourism Bhodhi • Airlines • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Kurwisa • dzidzo • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Interviews • Investments • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Sangano rinotarisira kushanya kwepasirese senge UNWTO yakashoropodzwa kuti iite zvisina basa mukugadzirisa dambudziko repasi rose re COVID-19
Global Tourism Resilience uye Crisis Management Center inotora chinetso.
Madutu paakaparadza nyika dzeCaribbean muna2017 gurukota rezvekushanya iri rakabatikana kudzikisa kukanganisa. Kana dutu rakarova zvakare muhumwechete gurukota rakabvunza nyika yekushanya kuti ikwire uye itarisane nemhando ipi neipi yedambudziko pamwechete.
Chirevo cheMontego Bay chakasainwa kumusangano weUNWTO muna 2018 wakadaidzira kuti kumiswe chinzvimbo chekugadzirisa kukanganisa kwekushanya.
Iine nerubatsiro rwevadzidzi vanobatanidzwa uye hunyanzvi muYunivhesiti yeWest Indies muJamaica, Hon. Tourism yeJamaica, Edmund Bartlett akazivisa kugadzirwa kweyekutanga Global Tourism Resilience uye Crisis Management Center. Makore gare gare nzvimbo dzakavambwa muMalta, Kenya, Nepal, Japan nedzimwe nyika pasi rose.
Nyika haina kumboziva nezveCoronavirus panguva iyoyo, asi gurukota iri rakanga ratounza nyika pamwechete uye hurumende yavo diki yakanga yabhadhara.
Kubuda kweCoronavirus mu2020 kwaive kudzosera shure kukuru kuJamaica. Panzvimbo pekurega, uyu mushumiri akasvikira kune vakanakisa mukuchengetedza nekuchengetedza. Haana kungobatsira mufananidzo wenyika yake chete, asi akakwanisa kuchengetedza kushanya kumhanya munguva dzisingakwanisike.
Mr. Bartlett akapihwa iyo Tourism Gamba zita ne World Tourism Network fkana mupiro wake kunyika yake nepasi rose.
Jamaica senge chero chimwe chitsuwa republic inovimba zvakanyanya pamubhadharo unogadzirwa neyekufambisa uye indasitiri yekushanya. Nekutenda kwake kwakasimba nyaya dzemuno dzinogadziriswa zviri nani mukati mekufambiswa kwepasirese, Gurukota rezvekushanya kuJamaicas Edmund Bartlett anoonekwa kwese kwese semutungamiri wepasi rose uye munhu akatsigira kushanya kwekushanya.
Kushanda zvisina simba kudzikisira kutambura kwenzvimbo dzekufamba uye dzekushanya nekuda kwe COVID-19, Gurukota Bartlett vagara vachitsvaga kunze kwemabhokisi mikana Haana chete kugona kumisikidza misika mitsva nekumisa ndege kubva kuJamaica kuenda kuNigeria, asi tariro yake yekushanya iri mukuvandudza mushonga. Kudonha chete ndiko kunonoka kugovera
Nhasi Hon. Gurukota Bartlett vachataura nezve zvematongerwo enyika ezvekudzivirira, zvinokosheswa pasirese uye chokwadi chekuenda vakamirira nzvimbo iyi. Kukurukurirana nenyanzvi dzekunze kunoongororwa naPurofesa Lloyd Waller, Sachigaro weGlobal Tourism uye Resilience Management, iri muJamaica.
Heino izvo Minister Bartlett vanotora:
Sezvo hupfumi hwenyika huchienderera mberi nekudzora kubva mukuparadza kwerunyararo chirwere checoronavirus, tarisiro muna2021 yakachinja zvakanyanya kuve nechokwadi chekutumirwa kwepasi rose kwejekiseni kumatunhu akakanganisika pasi rese, ayo anoonekwa seakakosha kukunda muhondo wepasirese. kupesana ne COVID-19 pamwe nekudzoreredza hupfumi hwepasirese kune imwe nhanho yechinyakare munguva ipfupi inogoneka.
Kusvika pari zvino, mucherechedzo wekutarisira kwakakura kuti mishonga inosvika mamiriyoni makumi maviri nematanhatu yemajekiseni akatopihwa nyika dzese makumi mapfumbamwe nemaviri pasi rose, zvichidudzira kusvika pamatanho anosvika mamirioni 206 zuva nezuva.
Sezvo mamwe majekiseni ekurwisa uye kuyedza kunoitwa zuva nezuva, kunyanya mune hupfumi hwapamberi, majekiseni akawanda akajekeswa neWorld Health Organisation kuti ishandiswe zvakanyanya uye kutumirwa mushure mekuratidzira kugona kwakanyanya panguva yekuyedza mukuwana inoculation inopesana neECVID-19, kazhinji mushure memaviri kana mamwe madhiri.
Mushonga wePfizer-BioNTech wajekeswa kuti ushandiswe kuNorth America, Europe neMiddle East, uye mishandirapamwe yekudzivirira nhomba yakatanga munyika dzinosvika makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe. Vagadziri veCovishield, iyo India-yakaburitsa vhezheni yeAstraZeneca jekiseni, vakatotangisa mazana ezviuru zvevhosi kunyika dziri muCaribbean neLatin America, kusanganisira Dominica, Barbados, The Dominican Republic, Trinidad & Tobago, Argentina neEcuador.
Serum Institute yeIndia, imwe yevanogadzira majekiseni makuru pasi rose, yakavimbisa kuburitsa 1.1 bhiriyoni dosi yemushonga weAstraZeneca. IWHO munguva pfupi yapfuura yakasimbisa kuti nyika makumi matatu neshanu muLatin America neCaribbean dzichawana mamirioni makumi matatu nemakumi matatu nematanhatu muchikamu chekutanga chekutumirwa. China neRussia vari kutengesawo nekuparadzira majekiseni avo eECVID-36 muLatin America.
Ndichiri kugamuchira ichi chakasimba pasirese kufarira uye kushingairira kwakatenderedza COVID-19 yekudzivirira kuedza, pane zvakawanda zvinonetsa Imwe, pachiyero chazvino chekudzivirira kwepasi rose kwezuva nezuva, angangoita mamirioni 6.53, zvinotora makore angangoita mashanu kufukidza 5% yevagari nemushonga wemishonga miviri maererano neBloomberg research. Iyi nhanho yazvino yekuremadza inofanirwa kukurumidza zvinoshamisa sezvo kuyedza kwehupfumi hwepasi rose kusingakwanise kumirira makore mashanu, kunyanya pakati pehupfumi hwakakanganiswa zvakanyanya.
Kechipiri, pane musiyano mukuru mukuparadzirwa kwemajekiseni pasi rese. Mufananidzo urikubuda ndewekuti nyika dzakabudirira dzinoita senge dziri kuramba zvikuru nzira yakabatana vachida kusimbisa kusaenzana pahunhu hwenyika. Naizvozvo WHO yakayambira kuti nyika yave pamucheto we "kukundikana kwetsika" sezvo nyika dzine hurombo dzichizvikanda kumashure nekuda kwekuti kubviswa kwejekiseni muupfumi hwakasimukira kuri kunyanya kukunda avo vari kusimukira uye kusimukira hupfumi - kunyangwe munyika zvakafanana kufa mwero.
Chokwadi, kunyangwe iyo US uye kunyanya mamwe nyika dzakapfuma dzakatanga kubaya nhomba vagari vayo kurwisa COVID-19, nyika dzichiri kusimukira, kumusha kumabhiriyoni evanhu, havasati vatowana mishonga yekudzivirira. Muchokwadi, dzinoda kusvika zana nemakumi matatu nyika dzainge dzisati dzaunza kamwechete jekiseni remushonga kune avo vakabatana vanhu zviuru zviviri nezviuru mazana maviri, senge vhiki rapfuura. Kugovaniswa zvisina kurongeka kwemajekiseni zvakare zvinoreva njodzi huru yekuchinja majekiseni anozvidza majekiseni aripo.
Ndezvipi zvinorehwa nezvezviitiko izvi kune hupfumi-hunoenderana nehupfumi hwamunogona kubvunza? Zvakanaka, zvinoreva zvakajeka. Iine anopfuura mamirioni makumi mashanu nemashanu emhosva dzakasimbiswa uye vanopfuura mamirioni efa, nyika nenzvimbo mukati meAmerica, kunyanya varombo pakati pavo, vari kusangana nehutano husina kumboitika.
Hupfumi-hunoenderana nehupfumi hwakarasikirwa ne12% yeGDP yavo zvichienzaniswa nehupfumi hwepasi rose hwe4.4%. Mari yekushanyirwa kwekutengesa kunze kwenyika yakadzika pasi rose pakati peUS $ 910 bhiriyoni kusvika US $ 1.2 trilioni muna 2020. Pakati pemamiriyoni zana kusvika zana nemakumi maviri emabasa mukufamba nekushanya kwakabairwa muna 100.
Vanogara mumahombekombe eCaribbean vanosvika pakati pegumi kusvika makumi matatu muzana muna 10. Vashanyi vanosvika vaive pasi kusvika makumi mana kusvika makumi matanhatu muzana muna 30. Mahotera mazhinji uye zvinokwezva vashanyi zviri panjodzi yekuwira mukukwereta uye kutambirwa.
Tourism ndiyo injini yekukura muCaribbean uye kukanganisa kwayo kwenguva refu kunoreva njodzi. Hupfumi hwedu hwuri kubuda ropa zvakanyanya uye hunoda kukandwa rwonzi. Mamiriro ezvinhu aripo nhasi akatarisana nehupfumi uhu, pamwe nevamwe kumatunhu epasi rose ari kusimukira, anogona kungotsanangurwa sedambudziko revanhu
Mhinduro yacho iri pachena: kuwanikwa kwejekiseni pakati penyika idzi kunofanirwa kuvandudzwa nekukurumidza. Hatigone kukwanisa kuita zvematongerwo enyika mhinduro kumatambudziko aripo. Ndiri kushandisa mukana uno kukoshesa hupfumi hunotsamira pakushambadzira.
Zvakakosha kuti chikamu chirarame panguva uye nekunze kwedambudziko riripo kuti rirambe richiita basa raro rakakosha senzira yekukonzeresa kugadzirisa hupfumi hwepasi rose uye kukura.
Pasina mubvunzo, kudzikira kwenguva refu uye kudzoreredza kwechikamu kucharatidza kuomarara kwehupfumi pamwe nekushayikwa kwemabhiriyoni evanhu pasi rose.